UKent MacDonald utyhila ilizwe elingaphakathi elinemibala kwimifanekiso yakhe engaqondakaliyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UKent MacDonald iphefumlelwe ngabantu abaluhlaza amahlathi apho unendlu yakho kwi Isiqithi saseVancouver, kwaye uzisebenzisela ukuhlakulela ubomi obungaphakathi obunemibala. Ukufota yeyona ndlela ikhethwayo yokubonisa ubukho bakho bangaphakathi, obuthatha ubume bemifanekiso engaqondakaliyo kunye nemangalisayo. Lo msebenzi wobugcisa yi ikhusi kuxinzelelo, ukukhokelela kubomi banamhlanje obugcwele iishedyuli kunye nomsebenzi wesikolo.
Kumsebenzi wakho, uya kuhlala ufumana ubuhle ukulingana phakathi kokukhanya nesithunzi esazisa ngembali ngelixa isimema ukuba sizifumanele ezethu intsingiselo. Nantsi udliwano ndlebe Benze uKent MacDonald, apho aphanda iimfihlo zabo.
Ngaba ungasitshela kancinci ngohambo lwakho lokufota?
Xa ndijonga emva ngoku bendizakutsho ndonqene ukusebenzisa ikhamera. Kububudenge ukucinga ukuba ngaxa lithile ebomini bam ndachasa. Ekuqaleni yayi malunga nodadewethu, uKapri, owayefuna ukuba ngumfoti. Ngaphandle kwento yokuba mdala unyaka onesiqingatha kunam, abantu abaninzi basiphazamile njengamawele. Ndivile ukuba ukufota yinto yakhe, kwaye andifuni ukuthatha loo msebenzi kuye, kwaye sahlule. Kububudenge ukucinga ngaloo ndlela, ndiyazi, kodwa ndaphela ndisiya kuhambo lokuya esikolweni xa ndandikwibanga lesibhozo, kwaye ndiphethe udade wekhamera yedijithali. Ndithathe isigqibo sokuthenga eyam i-DSLR kwihlobo elilandelayo, kwaye khange ndiyeke ukudubula ukusukela oko.
Zeziphi ezinye zezinto onomdla kuzo?
Ndihluthiwe ngumsebenzi nesikolo kangangokuba andinaxesha lanto nantoni na ke ndicinga ukuba ndingatsho nje ukufota. Ndihlala ndizama ukuba nexesha lokufota. Kodwa eyona nto intle kukuba ndingathanda ukuhamba ngakumbi, ndidlale ngezixhobo zam, ndizobe, nditsho nokufunda ngakumbi kunokuba kulungile.
Ithetha ntoni ukufota kuwe?
Ukufota kuye kwaba yinxalenye yam, lulwandiso lwengqondo yam. Ndizinikele kuye kunyaka ophelileyo kangangokuba andinakucinga ngobomi bam ngaphandle kwakhe. Njalo xa ndixinezelekile, ndiyakwazi ukuthabatha ikhamera yam, uye kwi-adventure, kwaye ufumane uxolo lwam kwangoko.
Ukudibanisa iikhonsepthi ezinomfanekiso ngqondweni kwiifoto zakho. Yintoni egcina ukhuthazeka?
Ukuqala kwam ukufota, ndafumana inkuthazo kumculo. Kodwa xa ndandiqala iprojekthi yam enesidanga se-365, ndithatha ifoto enye ngosuku lonyaka, kwaba nzima ukuyila. Ndifuna ukwenza into entsha yonke imihla. Ndifuna ukuzityhala ukuba ndibengumfoti ongcono. Ndazivumela ukuba ndithwale uxinzelelo lokufezekisa, kwaye ndaqala ukwenza into eya kundonwabisa.
Uchitha ixesha elingakanani?
Xa ndisebenza kwiprojekthi yam engama-365, ndayeka ukucwangcisa zonke iinkcukacha, ndaye ndagqiba ngokwenza into eza engqondweni ngezo ntsuku. Ixesha ibiyinto yobunewunewu kum kwaye ibingeyonto endinokuyifumana, nangoku andenzi lucwangciso lwexesha elide.
Inxalenye enkulu yomsebenzi wakhe uquka self-portraits. Ngaba ungasitshela kancinci malunga nendlela yokufumana ibhola efanelekileyo?
Ibiyinkqubo enomdla, ekuqaleni kweprojekthi yam engama-365 bendidubula ngeNikon D3100. Andizange ndazi, nje ixesha lokuzimela kunye ne-tripod. Xa bathi ekugqibeleni bandinike iCanon 6D konke okutshintshileyo. Ngoku vumelanisa ifowuni kwikhamera, undinike imbonakalo yomsinga ophilayo, kwaye ndiyisebenzisa njengesixhobo sam esingenazingcingo. Ngokunyaniseka kulula kakhulu njengoko ndinokufumana umpu ogqibeleleyo ngokukhawuleza ngoku.
Ngaba uzibekisa njani iifoto zakho?
Kwinxalenye enkulu yokukhanyisa kwendalo. Ngokwengxenye kungenxa yokuba ilanga lisimahla. Izibane endizenzileyo endinokufikelela kuzo zibukhali kakhulu.
Yintoni ekufuneka unayo kwibhegi yakho yegiya?
Kwingxowa yam ndinekhamera yam kunye neelensi kuphela. Kodwa ukuba unekhamera elungileyo kunye noluvo olulungileyo awuyidingi enye into.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » UKent MacDonald utyhila ilizwe elingaphakathi elinemibala kwimifanekiso yakhe engaqondakaliyo